के हो फिस्टुला? के यसको उपचार सम्भव छ?
नेपाल लाइभ मंगलबार, पुस २९, २०७६, ०८:१५
काठमाडौं- फिस्टुला शरीरको कुनै पनि भित्री अंगमा पर्ने अनावश्यक प्वाल हो। महिलाको पाठेघरमाथि पिसाबथैली र तलपट्टि दिसाथैली हुन्छ। बच्चा जन्माउने व्यथा लाग्दा पाठेघरको मुख पातलो हुन्छ। बच्चाको टाउको पाठेघरको मुख हुँदै योनीमार्गको तल्लो भागमा आउँछ।
फिस्टुला किन हुन्छ?
फिस्टुला हुनुको मुख्य कारण लामो समय व्यथा लाग्नु र योनीमार्गमा बच्चाको टाउको धेरै बेरसम्म रहनु हो। त्यसैले गर्भवती भएको बेलामा नियमित स्वास्थ्य परीक्षण गराइरहनुपर्छ।
बच्चा जन्माउने व्यथा लागेपछि तालिमप्राप्त स्वास्थ्यकर्मीले बच्चा नजन्माएमा,
न्यून आर्थिक स्थिति र कामको बोझका कारण,
बालविवाह, बलात्कारलगायत अन्य प्रकारका लैङ्गिक विभेदमा परेका महिलाले आवश्यक स्वास्थ्य उपचार र परामर्श सेवाको अभावमा,
योनीबाट निरन्तर पिसाब, दिसा चुहिनु
योनीमार्गको भागमा रक्तसञ्चार बन्द हुनु
रक्तसञ्चार बन्द भएको भागको कमलो मासु मरेपछि त्यहाँ प्वाल पर्छ
सानै उमेरमा विवाह नगरिदिने,
सानो उमेरमाबच्चा नजन्माउने,
बालिकालाई खानामा विभेद नगर्ने,
किशोरावस्थामा विकासका लागि आवश्यक पर्ने सन्तुलित आहारमा विशेष ध्यान दिने,
गर्भवती महिलालाई पर्याप्त मात्रमा सन्तुलित खाना खुवाउने,
गर्भवती जाँच नियमित रुपमा कम्तीमा ४ पटक गर्ने,
गर्भवतीको श्रीमान् तथा परिवारका सदस्यले गर्भावस्था र प्रसवको समयमा आवश्यक पर्ने सम्पूर्ण व्यवस्थाको पूर्वतयारी गर्ने,
सुत्केरी व्यथा लाग्नासाथ स्वास्थ्य संस्थामा लगेर तालिम प्राप्त स्वास्थ्यकर्मीको सहयोगमा बच्चा जन्माउने,